Kulankii baarlamaanka ee maanta oo lagu ansaxiyay qodobka xeer hoosaadka ee lacag ka qaadista musharaxiinta.
Xildhibaanada baarlamaanka KMG ah ayaa maanta loo qaybiyay xeer hoosaadka baarlamaanka KMG ah ay ku howl gali doonto waqtina loo siiyay in ay ka soo baaraan dagaan kadibna looga doodo kulanka bari galab.
Gudoomiyaha baarlamaanka oo furay shirka ayaa soo jeediyay in xeer hoosaadka ay baarlamaanka qaataan kadibna laga doodi doono bari galab waxa uuna soo jeediyay in hadda laga doodo qodobka 37aad ee xeer hoosaadka oo ka hadlayay lacagta laga qaadayo musharaxiinta waxa uu uuna u qornaa sidan.
1) Musharax kasta ee isku soo taaga Doorashada madaxweynenimada waa inuu bixiyo laba kun oo dollar, ama sarifkeeda oo shilling Soomaali ah haddii doorashada lagu qabanayo wadanka gudihiisa.
2) Lacagtaasi iyada ah waxey noqoneysaa kharash diiwaangelin, fulinta howlaha doorashada gundhig daqli dhaqaale oo uu yeesho baarlamaanka federaalka ee Jamhuuriyada Soomaaliyeed.
3) Doorashada & shuruudaha kale ee doorashada madaxweynenimada waxaa nidaaminaya qodobka (40 iyo 41) ee axdiga qaranka.
Intaas kadib gudoomiyaha ayaa dalbaday in cod loo qaado qodobkan isla maanta inta ogol in uu dhaqan galo iyo inta ka soo horjeeda.
Xubnaha baarlamaanka ee soo xaadiray maanta oo gaarayay 172 waxaa isku raacday in Xeerkan uu dhaqan galo 160 xildhibaan halka 8 ka mid ah ay ka soo horjeesteen in uu dhaqan galo waxaana ka aamusay afar xildhibaan oo kaliya.gudoomiyaha ayaa sheegay in qodobkaas uu sidaas ku dhaqan galay maanta laga bilaabona aysan jiri doonin cid ka hadli karta mar hadii intii badnayd ee ay isku raaceen in uu dhaqan galo.
Dhinaca kale waxaa maanta kulan ugu qabtay xarunta shirka ee Mbagathi musharaxiinta madaxweyne guddiga nidaaminta doorashooyinka oo u cadaynayay musharaxiintaas in ay soo gudbiyaan lacagta iyo waliba in ay buuxiyan foomamka keenaana laba sawir iyo araajidooda balse wax walba ay ka horeyso lacagta.
Arrintan ayaa buuq ka dhashay kadib markii qaar ka mid ah musharaxiinta ay arrintan lacagta ku gacan sayareen iyagoo sheegay in baarlamaanka wado arrin caburis oo uu dadka ku kala eryayo xuquudoodana meel looga dhacayo.
Balsee guddiga nidaaminta doorashada ayaan arrintan ka hadlin iyagoo siiyay musharax walba waraaqo ay qoron yihiin shuruudaha looga baahan yahay musharax walba.
guddiga nidaaminta ayaa ilaa hadda lacagta curaarta ah ka helay todobo musharax sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka KMG ah shariif xasan Sh Aadan.waxaaa kale oo gudoomiyuhu sheegay in musharax walba laga saxiixayo in uu la shaqayn doono madaxweynaha la doorto.